Apple na-achọ onye isi mmemme iji duzie usoro mmemme | Esi m mac
Apple na-achọ onye isi ọrụ mmemme na-eduzi mgbasa ozi mmemme
Apple nwere mmasị igo onye njikwa ihe omume iji duzie ma chịkwaa ọrụ nke ya n'ọwa dị n'ihu. O doro anya ma ọ ga-agbasa ọdịnaya dị otú ahụ site na Apple TV dị ka ọwa ọzọ, ma ọ bụ dịka ọrụ na Apple Music. Na ya atụmatụ maka e guzobere a otu ẹkedori a ọwa, Apple ga-enwe mmasị igo ọrụ nke Michael Lombardo, onye bụbu president nke HBO. Kọntaktị ndị a dị ka ụbọchị laghachi azụ na mmalite nke afọ, mgbe Apple malitere mkparịta ụka na Lombardo iji "tụlee atụmatụ mmemme Apple" n'ihe gbasara mmemme mgbasa ozi.
Lombardo nwere ahụmịhe dị mkpa na mpaghara ọdịyo. Ruo mmalite 2106 ọ nọ na HBO, mana ọ hapụrụ ọnọdụ ahụ ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọdịnaya. Achọrọ m ịrụsi ọrụ ike karị n'ịmepụta oghere mbụ na nke okike. Ọ na-eduzi ihe ngosi ugbu a maka netwọ HBO dịka onye na-emepụta ihe, mana nkwupụta Apple nwere ike ime ka ọ baa uru, laghachi na ọnọdụ nhazi ọdịnaya.
Apple kwetara na ọ nọ na usoro ọrụ iji mepụta ọnọdụ ahụ, nke o doro anya na ha na-agwa Lombardo, nke ga-aza ajụjụ ndị ngalaba ọdịyo na-arịọ maka ọnwa, gbasara Apple.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ amalitela ụfọdụ ọrụ na usoro ngosi nke eziokwu dị ka «Etwa nke ngwa»Ma ọ bụ usoro«Carpool Karaoke«, Ọtụtụ ndị Hollywood na-agbagwoju anya banyere ihe Apple chọrọ n'ezie iji mepụta vidiyo. Ajuju ndi a bu ihe Apple choro ighari ime ihe ngosi nke aka ya ma ochoro iso Netflix, Amazon na Hulu.
N'oge atụmatụ ahụ dị na isi mmalite ya, ma ọ bụ Apple na-eme ihe ọ bụla na-ezobe nzuzo, ka ọ ghara ịpụta. N'ihe metụtara ozi anyị nwere, na Jenụwarị Cook kwuru na ya na-enyocha ụzọ ọzọ dị iche iche. Na mbido Mee, o kwuputara na ya na-anwale ihe ha meputara n’onwe ha, na mgbe ule izizi gachara, na ya ga eme nkpebi.
Kedu ụzọ ọ bụla, ozi a na-agwa anyị na Apple chọrọ ịnwe ọwa ọdịnaya nke ya ma na-agụta ndị ọkachamara kachasị mma na mpaghara ahụ ka ha gbalịa iju anyị anya, dịka anyị na-emebu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-achọ onye isi ọrụ mmemme na-eduzi mgbasa ozi mmemme
DJI na-ebupụta ngwa iji nwee ọ enjoyụ na ndekọ nke drones ya na Apple TV
Abụọ ịrịba ngwa na-enye na ị gaghị enwe ike uche